Ny millennial dia mety ho sitrana ny indostrian'ny sambo fitsangantsanganana
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Ny millennial dia mety ho sitrana ny indostrian'ny sambo fitsangantsanganana
Febroary 10, 2021
Ny ilain'ny Millennial ny traikefa mety ho ny firongatry ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo
Mila traikefa ny olona an'arivony taona
Ny fitsangantsanganana an-tsambo dia manome traikefa nahafinaritra sy tsara indrindra
Ny fitsangantsanganana an-tsambo dia afaka mamonjy traikefa hahatonga ny Millennial adrenaline hitombo
Efa henonao daholo izany rehetra izany. Mila traikefa ny olona an'arivony taona. Tsy te hividy entana izy ireo; aleon'izy ireo miaina zavatra. Ny fitsangantsanganana an-dranomasina no mety ho fiara tsara indrindra hampita ireo traikefa ireo, hoy ny manam-pahaizana momba ny indostrian'ny sambo.
Andao atomboka amin'ny famaritana ny “traikefa” ho "miaina ny tsara indrindra." Amin'ny ambaratonga iray dia mitaky ny fireharehana. Tokony halefa amin'ny fahitana izy io. Raha atao teny hafa, dia afaka maka sary ianao, mandefa izany any amin'ny tranokala sosialy ary miteny hoe: “Jereo izay ataoko izao.”
Ny fitsangantsanganana an-tsambo dia napetraka mba hanomezana mahafinaritra sy ny sasany amin'ny karazana traikefa ambony.
Ohatra 10 amin'ny fomba ahafahan'ny fitsangantsanganana mitsangatsangana traikefa hahatonga an'i Millennial adrenaline hitombo:
Ny fitoeran'ny divay oceangoing be pitsiny indrindra. Mpankafy divay ianao. Nisafidy ny sambonao ianao noho izany antony izany. Mahatsiaro ho zavatra manokana aorian'ny tsindrin-tsakafo? Manana divay seranana miverina amin'ny taona 1800 izy ireo. Tsy misy divay zara raha misy ao an-trano raha tsy amin'ny fizarana. Azon'izy ireo atao koa ny mandamina sidina manandrana divay Bordeaux voalohany. Inona no tantara hotantaraina!
Top amoron-dranomasina 10 manerantany. Manome isa azy ireo ny magazine. Misafidy sambo mitsidika mpivady ianao. Eo ivelan'ny sambo ianao, espadrilles amin'ny tongotrao ary fakantsary eny an-tananao. Ireo traikefa nosy tsy miankina natolotry ny sambo fitsangantsanganana dia manana morontsiraka tsara tarehy indrindra ihany koa.
Fipetrahana olona tranainy indrindra amin'ny hemisphere sy ny toerana izay afangaro ny fahalalan'olombelona. Aza mahazo prehistorika. Ny piramida any Egypt dia efa antitra, saingy vao tsy ela akory izany raha oharina amin'ny Theopetra Cave any Tessaly, Gresy. Taona 135,000 taona lasa izay dia inoana fa misy ny firafitra namboarin'olombelona tranainy indrindra. Espana sy France dia manana toerana maromaro misy hosodoko lava-bato miverina 15,000 ka hatramin'ny 30,000 taona lasa izay.
Trano fisakafoanana # 1 eto amin'ny nosy. Trip Advisor dia manome isa ny trano fisakafoanana isaky ny toerana. Ny lisitra magazay lafo vidy dia tampon'izao tontolo izao. Ilay mpijery divay manome loka ho an'ny lisitra divay tsara indrindra. Ny iray amin'ireto vatosoa ireto dia any amin'ny nosy izay tsidihin'ny sambonao. Vinavina telo izay hisakafoanana atoandro anao.
Zavamaniry na voninkazo tsy fahita firy eto an-tany. Misaotra ny boky be mpividy indrindra an'i Kevin Kwan, Crazy Rich Asians, fantatray fa misy voninkazo tsy fahita firy eto amin'izao tontolo izao. Mitranga ny fijanonan'ny sambonao amin'ny seranana misy zaridaina botanika kilasy eran-tany. Afaka mahita sy maka sary zavatra tsy ho hitan'ny namanao ianao.
Ziplining amin'ny ala anaty ala na any anaty ala. Raha ampitahaina amin'ny traikefa hafa, dia mety ho milamina ny fandehanana ziplining na fitsambikinana bungee. Ny toerana dia mety ho mahafinaritra. Ny fanatanjahan-tena koa dia mety hahatafiditra ireo taranja golf tsara indrindra eto an-tany.
Sambo kanto indrindra. Ny magazay dia manome isa azy ireo isan-taona. Namandrika amin'ny sambo lafo vidy indrindra ianao. Tsipika tsy mampino. Toiletrika. Serivisy butler. Champagne tsy voafetra. Izany dia indray mandeha amin'ny fiainana iray manontolo. Ohatra tsara amin'ny tsipika fitsangantsanganana vaovao dia ny Atlas Ocean Voyages, heverina ho iray amin'ireo andalana mahaliana sy manintona indrindra ankehitriny. Ny fahitan'izy ireo marika dia ny famoronana marika fizahan-tany luxe vaovao nofaritan'ny vondron'olona olona be fanahy manana filana tsy manam-petra amin'ny fiainana.
Ny tranokely malalaka indrindra eny an-dranomasina. CunardMpanjakavavy Maria 2 manana mpivady mirefy 2,249 2.301 metatra toradroa. 2019 metatra toradroa ny velaran'ny trano amerikanina, hoy i Statista! (XNUMX) Mandeha anaty kabine lehibe kokoa noho ny ankamaroan'ny trano ianao! Cunard dia sambon-dranomasina izay hampientanentana ny fanahinao amin'ny fitsangatsanganana.
Ny filentehan'ny masoandro tena lehibe indrindra hatramin'izay. OK, ny masoandro milentika miaraka amin'ny toerana rehetra. Gazety iray hafa no manome ny toerana misy ny filentehan'ny masoandro tsara indrindra. (Misy tena manao izany!) Mijoro amin'ny toerana mety ianao amin'ny fotoana mety, fakantsary an-tànana. Tena tsy misy na inona na inona azo ampitahaina amin'ny filentehan'ny masoandro mahafinaritra avy amin'ny sambo fitsangantsanganana amin'ny ranomasina manga.
Ny sambo mpandeha lehibe indrindra mitsingevana. Safidinao ny sambo lehibe indrindra sy lehibe indrindra ary farany: 6,600 25 ny mpandeha. Raha mahita olona vaovao XNUMX ​​isan'andro ianao isan'andro, dia maharitra efa ho sivy volana vao mihaona amin'izy rehetra! Fito andro fotsiny ny fitsangantsangananao!